नयाँ नेपालका केही आश्चर्यहरू !
देश उही थियो, उही छ र उही रहनेछ। तर देशको डाडु पन्यौ हातमा लिनेले धेरै सम्म देश वासीलाई झुक्याए । उनीहरूले सिङ्गो राष्ट्रलाई पनि बजारमा बेच्न राखिएका कपडा जस्तै कहिले पुरानो त कहीले नयाँ भन्ने धमाकेदार व्याख्याहरू गरे । अविकसित देश विकास गर्नु स्वागत योग्य कुरा हो, तर पहिलै देखि रहेको मुलुकलाई ‘नयाँ’ बनाउँछु भन्ने चाहिँ हावादारी कुरा नै हो ।
देश विकसित, संवृद्ध वा सुन्दर बनाउन सकिन्छ, तर देश कहिल्यै पुरानो हुँदैन र पहिले देखि नै स्थापित देशलाई ‘नयाँ’ बनाउन पनि सकिन्न । यस विषयमा आफ्नै बुढाले पनि कुनै बेला सुन्दर स्त्री, फूल र नयाँ नेपालका जोकरहरु ! लेखि सकेकाले म अरू लेख्दिन । तर योग्यतम नेताहरूले देश ‘नयाँ’ बनाउन थालेपछि नेपालमा के के चमत्कारहरू भए त ?। पक्कै पनि पुरानो नेपालमा भन्दा नयाँ नेपालमा विरलै सही तर धेरै आश्चर्यजनक दृश्यहरू देख्न पाइन्छ । आजको पोस्टमा मैले कहिलेकाहीँ देख्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका नयाँ नेपालका केही आश्चर्यहरूलाई उतारेकी छु ।
सायद नेताहरूका अनुसार माथिको चित्रको पहिलो नक्शाको जस्तै ‘एक ढीक्का’ पुरानो नेपाल लाई दोस्रो नक्शाको जस्तै वा त्यो भन्दा पनि अझ टुक्रा टुक्रामा विभाजित गर्नु नै ‘नयाँ’ नेपालको परिभाषा र सार्थकता दुबै होलान। अनि तथाकथित चमत्कार र आश्चर्य पनि त्यही नै । तर म भने त्यो हैन, अरू नै आश्चर्यहरूको तस्बिर बाँढदैछु यस पटक। ल हेर्नुस:
(लौ हेर्नुस पहिलो अचम्म- -काठमाण्डौको धारामा साँच्चीकै पानी आएको)
(यो तस्बिरमा केही आश्चर्य छैन रे ?—इन्भरटर वा जेनेरेटर प्रयोग नगरी काठमाण्डौमा बलेको बत्ती हो यो …. यहाँ कहिलेकाहीँ यसरी पनि बत्ती बल्छ । छैन त अचम्म ! )
(बत्ती बाल्ने मात्रै हो र ? कहीलेकाहीँ त यसबाट टि.भि र पंखा पनि चल्छन )
(यसलाई त आश्चर्य मात्रै हैन, ‘महा-आश्चर्य’ भन्नु पर्छ – यतातिर पनि कहीलेकाहीँ पेट्रोल पम्पमा पैसा तिरेर पेट्रोल किन्न पाइन्छ त्यो पनि लाइन नलागीकन )
नराम्रो 'बन्द' र राम्रो सन्देश !
बुढा-बुढीको झगडामा बन्द, गोरूले अर्काको बारीमा बाली नास्दा बन्द, चिट चोर्न नपाउँदा बन्द, घुस खान नपाउँदा बन्द, ट्याक्सीको मिटर आफूखुशी 'एडजस्ट' गर्न नपाउँदा बन्द । विगतमा यी र यस्तै अनावश्यक, अराजक र अनैतीक माग र कारणका लागि धेरै पटक उपत्यका, कुनै जिल्ला वा नेपाल बन्द भैसकेका छन् । यस्तै र यो भन्दा पनि नाजायज कारण र मागका लागि धेरै पटक बन्द भैसकेकाले आजकल 'बन्द' भन्ने सुनेँ भने कसले?, किन?? वा के कारणले ??? भनेर सोध्न र सोच्न छाडेकी छु । भन्नको लागि जसले जेसुकै कारण देखाए पनि न त कुनै बन्दले कसैको माग पुरा हुन्छ न कुनै बन्दले कसैको सिद्धान्त वा सत्यता प्रमाणित हुन्छ । जसले जेको लागि भनेर आयोजना गरे पनि अन्तमा दु:ख पाउने जनता नै हुन्छन् र यो बन्दले आजको दिनसम्म कसैको भलो गरेको मैले सुनेकी छैन ।
हामीलाई दाल-भात भएर मात्रै हो । म त कहिलेकाहीँ सोच्छु प्रजातन्त्र भएको देशमा जनताले आफ्नो पसल खोल्दा तोडफोड हुन्छ, गाडि चलाउँदा आगजनी हुन्छ र आ-आफ्नो शिक्षा वा रोजगारको लागि हिँडदा मुठभेडमा पर्नु पर्छ भनेर विदेशीहरूले सुने भने हाम्रो देशको प्रजातन्त्रको कस्तो खिल्ली उड्ला भनेर मलाई लाज लाग्छ । त्यसमाथी प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र स्वतन्त्रताको लागि बन्द आयोजना गरेर यो सबै तोडफोड गर्ने नेताको "ईमेज" थोरै मात्रै मानवता भएको वा सोच्ने शक्ति भएका मानिसमा कस्तो बन्ला जस्तो पनि लाग्छ ।
तर जे जस्तो भए पनि हाम्रोमा यस्तो बन्द चलीनै रहेको छ । अनि यस्तै बन्द गरेर करौडौँ जनतालाई दु:ख दिने नै 'नेता' वा 'ठूला मान्छे' भएका छन् यहाँ ।
आज पनि बन्द रैछ। तर माथी लेखेजस्तै कसले, किन र केका लागि गरेको भनेर कसैलाई सोधिन मैले । तर बारम्बारको बन्दबाट वाक्क भएका जनताले विस्तारै यो बन्दको विकृति रोक्न जागरूकता देखाएको कुराले भने मलाई केही उत्साहित गरेको छ ।
आज दिनभर कामको सिलसिलामा वाहिर निस्केको थिएँ । त्यसै समयमा आजको "असफल बन्द" केही तस्विरहरू खिचेँ । मोबाईलबाट र त्यो पनि चलीरहेको गाडीबाट खिचेकोले तस्विरहरू राम्रा छैनन् तर आजको बन्दको अवज्ञाले भने धेरै राम्रो सन्देश दिएको छ ।
आजको पोस्टमा यही बन्द अवज्ञाका केही तस्विरहरू:
(मोटरसाइकल, कार, टेम्पो र बस सबै चले आज-- सुन्धारा बाट न्यूरोड जाने बाटो)
(ग्राहक पर्खेर बसेका ट्याक्सी, चल्दै गरेको माईक्रो र खुला सटरहरू--गौशाला नेरको दृश्य)
(यात्रुको चाप हैन, यात्रु पर्खदै गरेका सफा टेम्पोहरू--न्यरोड गेटनिेरको खाली टेम्पो)
(बस, ट्रक, टेम्पो,जिप सबै एकै ठाउँमा--चावहिल चोक नेरको एक दृश्य)
(लौ यहाँनेर त झण्डै जाम नै भाथ्यो -- हरेक बन्दको यस्तै अवज्ञा होस )
छोरीको प्रोजेक्ट वर्क र काठमाण्डौका धरोहरहरू !
ब्लगमा हाल्ने सर्जामको अभाव भएको हैन्, तर केही व्यस्तता, केही अलमस्तता र केही भने बिजुली बत्तीको अस्तव्यस्तता ले गर्दा ब्लग अपडेट नगरेको पनि धेरै भएछ । यो बीचमा केही ‘ब्लग बन्न सक्ने’ तस्विरहरू पनि खिचेकी थिएँ तर माथि भनिएकै प्रतक्ष र अप्रतक्ष कारणहरूले गर्दा ब्लग धेरै दिन सम्म सक्रिय हुन सकेन ।
यो बीचमा केही तस्विरहरू खीचेकी थीएँ-- छोरीको प्रोजेक्ट वर्कको लागि—। हो, केही समय अगाडि तीन कक्षामा पढ्ने छोरीलाई एउटा प्रोजेक्ट दिईएको थियो, काठमाण्डौका केही ऐतिहासिक संरचनाका तस्विरहरू जम्मा पारेर कपिमा टाँस्न !। हुन त इन्टरनेटमा सर्च गरेको भए पनि ती सबै उपलब्ध हुन्थे नै, तैपनि यो प्रोजेक्ट वर्क अप्रतक्ष रूपमा ३ कक्षाका विद्यार्थीलाई हैन्, उसका बाबुआमालाई नै दिइएको हो भन्ने लागेकोले एउटा बिदाको दिनमा क्यामेरा लिएर निस्केँ ।
धूलो-धूवाँ र प्रदूषणको साम्राज्य भित्र अझै पनि केही यस्ता धरोहरहरू काठमाण्डौमा छन्, जसले काठमाण्डौंको धूमिल हुँदै गएको ईतिहासलाई जिवन्त राखेका छन् । छोरीको प्रोजेक्टमा यी तस्विरहरू टाँसीइसके र उस्को प्रोजेक्ट ‘सफल’ पनि भैसक्यो । आजको पोस्टमा तीनै केही तस्विरहरू टाँसेर आफ्नो ब्लगलाई पनि पुनः सक्रिय गराउँदै छु :
(बाहिर २५, भीत्र २१३ सिँढी भएको, २०३ फिट उचाई भएको, १९८२ सालमा निर्माण गरिएको भीमसेन स्तम्भको नामले परिचित धरहरा –दुई भिन्न कोणबाट)
(यहाँ मैले कहिल्यै नाग देखेको छैन, कहीले काहीँ पानी पनि हुँदैन, तर यही हो काठमाण्डौको प्रसिद्ध नाग पोखरी)
(कि शहीद द्वार भनेको भए हुन्थ्यो, कि त “Martyr Gate”। आधा अङ्ग्रेजी र आधा नेपाली शब्दको नाम राखिएको अर्को धरोहर—सहीद गेट)
(काठमाण्डौको कथा बीर शमसेरले बनाएको घण्टाघरको चर्चा विना कसरी सकिन्छ र—अझै पनि चल्दै छ र समय बताउँदै छ यो बुढो घण्टाघरले )
(सहरीकरण र सक्रमणले च्यापीदै गएको अर्को स्थान—गणतन्त्र नेपालको ‘रानी पोखरी’ )
र अन्तमा यो बोनस फोटो:
(रानी पोखरीको किनारमा साँझको चपेटा—सबैलाई घर फर्कने हतार)
Posted by Sujan Sharma7comments/ टिप्पणी